कक्षा १२ को नतिजा सार्बजनिक ? कसरि हेर्ने रिजल्ट – Paluwa Khabar
माघ ७, २०७७ बुधबार 77
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा एक साताभित्र प्रकाशित गर्ने भएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले नतिजा प्रकाशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपालसँगको अन्तर्क्रियामा उनले विद्यालयबाट प्राप्त नतिजाको डाटा इन्ट्री गरेर रुजुको काम भइरहेको बताए ।
माघ पहिलाे हप्ता भित्र नतिजा प्रकाशन को तयारी भैरहेको समेत जानकारि प्राप्त भएकाे छ ।
म र मेरी श्रीमती काम गरेर थाकेका थियौं ।
उनी भुसुक्कै निदाईन् । म भने यहाँको सामानाको चौकीदारी गर्नु पर्ने भएको हुनाले एक रा’उण्ड ल’गाउन गएको थिएँ ।
दहेज एउटा प्रचलन हो जुन समाजको लागि श्राप हो। यसको बाबजुद पनि, मानिसहरूले यस अभ्यासलाई लामो समयदेखि जीवित राख्दै आएका छन्, आज दहेज सम्बन्धी एक धेरै चौंकाउने घ टना बाहिर आएको छ। दा इजो सम्बन्धित यो घ टनाको बारेमा सुने पछि तपाईको र गत पनि उ म्लनेछ। जहाँ एक महिला केहि महिना अगाडि बिहे गरेर सासु-ससुरामा आई। सासु ससुरा आएको केही दिन सम्म सबै ठीक थियो, तर केही दिन पछि ससुरालीहरूले उनलाई दहेजको आ रोपमा केटीमाथि द बाब दिन थाले। ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस******
भनिन्छ कि यो दहेजको का रण हो कि मन्जितका सासु-ससुराले उनलाई ल्याएको दिनमा उनलाई कु टपिट गर्थे। यदि मनजितका बुबा हरप्रीतले विश्वास गरे भने विवाहपछि मन्जितका ससुरालीहरूले हरप्रीतलाई आफ्नी छोरीलाई फिर्ता लैजान वा पैसा र दहेजको माग पूरा गर्न धेरै पटक बोलाउँथे।
तपाईंलाई थाहा छक्क लाग्नेछ कि मञ्जित जसको साथ विवाह भएको थियो केटो सेनामा कार्यरत छ। सेनामा भए पनि केटाले आफ्नी पत्नी र बुबालाई जबरज’स्ती दहेज दिन लगाए।
छिमेकीहरुका अनुसार यो भनिएको छ कि मनजितको पति दुई दिन अगाडि उनको घरमा आएका थिए।
घर आइसकेपछि ऊ आफ्नी श्रीमतीसँग झगडा गरिसकेपछि फेरि आफ्नो काममा फर्कन्छ। तर भोलिपल्ट उसकी छोरीले उनलाई बोलाएर उनका ससुराले उनलाई कुटेको बताइन्। यदि उनीहरूले चाँडै कुनै पनि मद्दत प्राप्त गरेन भने, तिनीहरू मार्नेछन्।
छोरीको कुरा सुनेपछि उनका बुबा हतारिएर छोरीको घरमा पुगे।*******थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’******
छोरीकोको घरमा पुगिसकेपछि मनजीतका बुबा तेत्ताको सोच्ने नसक्ने दृश्य देखेपछि बे’होस भए। मनजीतका बुबाका अनुसार उनकी छोरीको ला स स सुराको घरको लबीमा रहेको भेटियो।
आफ्नी छोरीको लाबमा पसेको देखेपछि उनले पुलिसलाई घ टनाको बारेमा जानकारी गराए। त्यसपछि पुलिस घ टनास्थ लमा पुगे र म ञ्जितको ला स आ फ्नो क ब्जामा लिए र उनका पो’इलि बिरुद्ध मु द्दा हा’ले।
पुलिसमा घटनाको रि’पोर्ट दर्ता गराएपछि उनका त्यो घरमा सबै घर छोडेर भागेको छन – एजेन्सी हिन्दिबाट साभार’
प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जाने तथा दाम्पत्य जीवन सुखि रहनेछ । पढाई लेखाईमा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ
बिभिन्न अवसरले पछ्याउँनेछन् भने चाहेको समयमा कामहरु सम्पन्न हुँने हुँदा आफन्तहरु खुसि हुँनेछन् ।
सुन्दर तथा बिलाशि बस्तुहरुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफुतिर लोभ्याउँन सकिनेछ । उत्तम बस्त्र, मनपर्ने भोजन तथा बिशेष उपाहार प्राप्तिको योग रहेकोछ । हप्ताको अन्त अथवा शुक्रबार र शनिबारको समय मध्ययम रहेकोले आमा तथा आफन्त सँग साना साना कुरामा राय बाजिनेछ भने साथिभाई सँग मनमुटाब सिर्जना हुने योग रहेकोछ ।
समयमा काम नबन्ने हुनाले आर्थिक क्षेत्र कमजोर रहनेछ । घर जग्गाको कारेबार गर्दा वा सवारि साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्ययम रहेकोछ ।
मंगलबार सम्मको समय मध्यमय रहेकोले स्वदेशि सामानको उत्पादन तथा बिक्रि घट्न सक्छ भने बिदेशि सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या देखापर्न सक्ने तथा उपचार खर्च बढ्ने योग रहेको छ । अल्छि गर्नेबानिले कामहरु बिग्रन सक्छ । अनाबस्यक खर्च बढ्ने हुँदा दैनिक खर्च बढेर जानेछ ।
बुधबार देखि समय उत्तम रहेकोले समयमा कामहरु सम्पन्न हुँने तथा अरुको काम गरि नाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्रमा थोरै समय लगानि गर्दापनि सकारात्मक नतिजा हात लागि हुँने ग्रहयोग रहेकोछ । तपाईको लुवाई ख्वाई देखेर सबैजना मोहित हुनेछन् ।
माया प्रेममा आफ्नो मान्छेलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउँदा मन प्रशन्न हुनेछ ।
हप्ताको पहिलो दिन अर्थात आईतबारको समय राम्रो रहेकोले व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने नयाँ काम पाउँने तथा नोकरिमा पदोन्नति हुँने समय रहेको छ ।
साथिभाई सँग रमाईलो भेटघाट हुँने तथा मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुँनेछ । पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग गरि आम्दानिका स्रोतहरु बढाउँन सकिनेछ । सोमबारबाट समय मध्ययम रहेकोले काम गर्दा कानुनको पालना राम्रोसँग गर्नुहोला राज्यबाट दण्ड तथा जरिवान हुँन सक्छ । माया प्रेमको दुरि बढ्ने हुँनाले मनमा नरामाईलो महशुस हुँनेछ ।
यात्राको क्रममा रुपैया पैसाको सहि परिचालन गर्न नसक्दा खर्च बढ्नेछ । बैदेशिक यात्राको तय हुँनेछ भने बिदेशि सामान तथा रुपैया पैसा हातलागी हुँने योग रहेको छ । बिदेशमा बसेर अध्ययन तथा काम गर्नेहरुले आजको दिन आफ्नो कामदेखि सन्तुुष्ट हुँनेछन् ।
व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने धनआगमनको गतिलो योग रहेकोछ । बैक तथा बित्तिय क्षेत्र सँग सम्बन्धित कारोबारहरु बढेर जानेछ ।
तरल पदार्थ तथा खनिज पदार्थको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय राम्रो रहेकोछ । पैत्रिक धन तथा सम्पतिको प्रयोग मार्फत मनग्गे आम्दानि हुनेछ ।
आर्थिक अवस्था राम्रो हुने हुनाले दैनिक फेरिनेछ । बुधबार र बिहीबारको समय मध्ययम रहेकोले नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खंदा राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । लामो दुरिको यात्राको तय गर्न सकिने भएपनि यात्राका क्रममा ध्यान दिनुहोला । रुपैया पैसा फस्ने योग रहेकोछ ख्याल गर्नुहोला ।
Prevसाह्रै दुखद खबर : टिपरको ठ’क्क’रबाट १८ वर्षीया अन्सु शिवाकोटीको मृ’त्यू !
एस.इ.इ परीक्षा बारे आयो येस्तो खबर !
फेरी आयो दुःखद् खबर ट्रक र भ्यान दु’ र्घटना, चौध जनाको मृ’ त्यु
घर बनाउँदा यी कुरामा सँधै ध्यान दिनुहोस्, सदा हुनेछ घरमा लक्ष्मीको बास